Mareykanka: Nin bangi dhacay oo arrin lama filaan ah sameeyay - BBC News Somali
Mareykanka: Nin bangi dhacay oo arrin lama filaan ah sameeyay
Xigashada Sawirka, Colorado Springs Police
Oday gar cad ayaa dhacay bangi, labo maalmood ka hor ciidda masiixiyiinta ee loo yaqaanno Chrismas-ka, ka dibna wuxuu lacagtii ku firdhiyay hawada isagoo dadweynaha ugu hambalyeynaya eray la mid ah "Ciid wanaagsan", sida ay dad goob joogeyaal ah sheegeen.
Lacagtii uu firdhiyay waxaa si deg deg ah u aruuriyay dadkii bangiga agtiisa marayay.
Booliska ayaa sheegay in "nin oday ah, oo cadaan ah" uu dhac u geystay bangi ku yaalla gobolka Colorado ee waddanka Mareykanka.
Falkan oo dad badan ka yaabiyay ayaa dhacay duhurnimadii maalintii Isniinta ee isbuucan, labo maalmood ka hor xilliga feestada ciidda masiixiyiinta.
""Bangiga ayuu dhacay, wuxuu usoo baxay bannaanka, lacagtii oo dhanna wuuxuu ku firdhiyay goobta uu ku sugnaa", sidaas ayuu yiri qof goobjooge ah oo la hadlay warbaahinta Colorado's 11 News.
"Wuxuu billaabay inuu lacagtii boorsada ka buuxday daadiyo, isagoo dhacaya, 'ciid wanaagsan!'"
Goobjoogeyaasha ayaa sheegay in ninka falka burcadnimada ah sameeyay uu markaas ka dib hor fariistay makhaayad qaxwada lagu cabo oo halkaas u dhaweyd, isagoo sugayay inay u imaadaan booliska, oo la xiro.
Arrinta kale ee la yaabka lahayd waxay noqotay in dadkii waddadaas ku sugnaa xilliga lacagta la firdhinayay ay dhammaantood aruuriyeen islamarkiina dib ugu celiyeen gudaha bangiga.
Taliska booliska Colorado Springs ayaa ninka bangiga dhacay magaciisa ku sheegay David Wayne Oliver, oo 65 jir ah. Lama aaminsana inuu lahaa dad kale oo ehelkiisa ah.
'Tuugadii ugu caqliga xumeyd'
Lixda nin oo dukaanka galaya
Sanadkii lasoo dhaafay, burcad hubaysan ayaa galay dukaan, mulkiilihii ayaana ka dalbaday in ay soo laabtaan marka uu lacag inta uu markaas hayay ka badan gado, sidii ayayna yeeleen…
Waxay u muuqataa in ay kaftan tahay, balse mulkiilaha dukaan ku yaalla Biljamka ayay arrintaas si run ah ugu dhacday.
Lix ruux oo raba in ay dhacaan dukaanka Didier ayaa maalin cad u soo galay.
Qofkii dukaanka gadayay ayaase u sheegay in ay soo noqdaan casar gaaban, si ay u helaan lacag inta uu markaas hayay ka badan. Balse taas badalkeeda markii dambe in la xiro ayuu ka shaqeeyay.
"Sidii maadays oo kale ayay ahayd," ayuu yiri isagoo u warramayay BBC-da oo taleefan kula hadashay. Waxaana loogu yeeray tuugadii ugu qaabdarnayd ee dalka Biljamka."
Ninka dukaanka leh ayaa sheegay in uu isku dayay in uu la saaxiibo tuugta 14 daqiiqana ay dukaankiisa ku sugnaayeen.
"Isjiidjiid ayay hawshu ku billaabatay balse waxba ma siinin, waxaana ku qanciyay in aan galinka dambe siin doono 2 ilaa 3,000 oo lacagta Yuuroo-da ah.
Nimankii ayaa rumaystay sidaasna ku tagay.
"Markii aan booliska u sheegay, ma aysan rumaysanin in ay soo noqon doonaan."
Balse saacaddu markii ay ahayd 05:30 galabnimo ayay soo laabteen, saacad ka hor markii dukaanka la xiri lahaa. Didier ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in uu arkay mid ka mid ah burcaddii oo albaabka taagan uuna ku wargaliyay in wakhtigii rawaxaadda aan la gaarin.
Markii ay 06:30 galabnimo soo laabteen markii saddexaad booliiska ayaa dhanka dambe ee dukaanka ku sugayay si ay u qabtaan.
Wiil yar iyo afar nin ayaana sidaas gacanta loogu dhigay.